A software ịchọta uru nzo na ịkụ nzọ n'ịntanetị
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụrụlarị onye na-agba chaa chaa n'ịntanetị, sọftụwia ịkụ nzọ egwuregwu mbụ a nwere ike ịba uru iji nyere gị aka ịghọta esi chọta ama uru nzọ.
Anyị na-agụkarị n'ịntanetị na ezigbo nsogbu nke ihe omume etinyelarị na nsogbu nke onye na-ede akwụkwọ, nke doro anya na-agbanwe ha maka elele ha site n'itinye ụtụ isi (adịchaghị elu).
Betting Tipster na-enye gị ohere ahụ, ozugbo ị banyere atụmatụ gị (na pasent) nke sortie nke ihe omume na ihe ịrịba ama 1-X-2 na nsogbu ndị ikwu na-enye ndị na-ere akwụkwọ, iji gosipụta nsogbu ndị ahụ na, n'echiche, onye na-ere akwụkwọ na-enye gị ka uru payout pasent.
Otu esi achọta uru bara uru: iji Betting Tipster
Ozugbo ibudatara usoro ihe omume ahụ wee malite ịmalite nke dị na folda ahụ, ị ​​ga-ahụ onwe gị n'ihu windo mmemme naanị, nwere mpaghara dị iche iche iji tinye data.
N'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume (Atụmatụ gị) atụmatụ gị ga-abanye dị ka pasent nke ihe ga-esi na 1-X-2 pụta na egwuregwu bọọlụ.
N'aka aka nri kama (Nsogbu Akwụkwọ) ị ga-abanye na nsogbu ndị enyere gị maka ihe ga-esi na ya pụta.
Ozugbo emere nke a, pịa bọtịnụ dị n'okpuru (Nyochaa Nsogbu Egwuregwu) na mmemme a ga - aga n’ihu na - atụnyere nsogbu ndị enyere n’iwu gị.
Otu esi achọta ego bara uru: dkpochapu ihe ndi ozo site na ego
Ihu ọma nke a software maka chọta uru nzo maka ịkụ nzọ egwuregwu na-ewepu akpaghị aka nke onye na-ere akwụkwọ na ụtụ etinyere na, ozigbo ị tụlere ezigbo pasent nke onye na-ere akwụkwọ kwuru na pasent ndị ị tụlere ma banye, ọ ga-elele ma nsogbu a na-enye gị dị obere ma ọ bụ karịa, n'ihe banyere ịkwụ ụgwọ, karịa atụmatụ gị maka ihe omume ịchọrọ ịkụ nzọ na.
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ị jikwaa ịme atụmatụ dị mma karịa nke nke onye na-ede akwụkwọ, na ọkara / ogologo oge ị ga-enwe uru!
Ọ bụrụ na nsogbu ndị a na-enye gị site na onye na-ede akwụkwọ dị ukwuu karịa atụmatụ gị, igbe ndabara dị mkpa ga-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka ihe atụ ahụ, na-egosipụta ohere nke nzọ ahụ dịka o nwere uru dị mma a tụrụ anya ya (EV +).
Ndị a bụ nkenke bụ ọrụ dị mfe ma bara uru nke sọftụwia ịkụ nzọ a, Betting Tipster na-enye ikike ijikwa ihe omume 6, mana o doro anya na ị nwekwara ike iji ya n'enweghị nsogbu iji nyochaa otu egwuregwu.
Nbudata Nbudata	MyTipster.zip - 1 MB
Categorie ịkụ nzọ Nkeji edemede